DHISMAHA ANOMICAASIGA FARAS: GUDAHA IYO DIBADDA - XOOLAHA
Daaweynta xoolaha ayaa baaraya qaabka jidhkiisa. Caadi ahaan, jidhka xoolaha ayaa loo qaybin karaa maqaallo, qalfoofka iyo xubnaha gudaha. Fahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan qaabdhismeedka jidhku wuxuu suurtogal u yahay in si sax ah loo qiimeeyo kartida xayawaanka ee la shaqeyneysa, si ay u caawiso haddii ay jirto baahi. Maqaalkani wuxuu baari doonaa dhismaha jirka faraskiisa - qalfoofkiisa, nidaamka gudaha gudaha iyo maqaalka.
Qalitaanka xayawaankan waxaa loogu talagalay inuu hor istaago culeys weyn, taas oo dhacda marka uu miisaanku socdo oo dhaqaajiyo. Guud ahaan, cuna qabateyntu waxay leedahay in ka badan 250 lafo marka ay dhalayaan, kuwaas oo qaar ka mid ah ay ku koraan qaangaarnimada. Qalitaanka shakhsiga qof weyn wuxuu ka kooban yahay 212 oo lafo oo ku xiran marin-biyood ama dhexdhexaad ah.
Waa muhiim! Iyadoo ay sabab u tahay culeysyada weyn ee lugaha, lugta jaban ee faras waa dhaawac aan si buuxda loo daaweyn karin. Haddii aadan rabin inaad ka takhaluso xayawaanka dhaawacan, waxaad u baahan tahay inaad u wareejiso qaabka nasashada ugu badan oo aanad u isticmaalin shaqaale ahaan.
Lafaha waxay u qaybsan yihiin shan kooxood iyadoo ku xiran tahay meelaynta jirka. Faras wuxuu leeyahay laf-dhabarka oo isku mid ah qaybaha kale ee qalfoofka, laabta, caleemaha, lafaha jilicsan iyo jilbaha bidha. Celcelis ahaan, koox kasta waxay ka kooban tahay 45 lafo. Lafaha miskaha waxaa ku jira saxaro yaryar oo cufan leh. Waxay ilaaliyaan maskaxda iyo xubnaha wajiga. Sumarka lafdhexaadku wuxuu isku daraa lafaha qoorta, dhabarka iyo dhexda, waa mobile iyo dabacsanaan.
Laga soo bilaabo vertebrae, labada dhinac, feeraha si habsami leh u fidsan, waxay ku xiran yihiin caawimaadda kartoonada ilaa heerkulka hoose. Waxay sameeyaan godadka xabadka, waxayna ka ilaaliyaan xubnaha gudaha inay saameyn ku yeeshaan. Lafridu waxay ku dhammaanaysaa lafaha sacralka, oo laga helo lafaha miskaha, taas oo abuuraysa dalool ah habka kaadida.
Ma taqaanaa? Faraha ugu weyn adduunka ayaa ku noolaa 1840-kii Ingiriiska. Nooca loo yaqaan 'Samson' oo da'diisu gaartay laba sano waxay gaareen dherer 2 m 20 cm oo qashin ah, miisaankana ka badan 1.5 kun kg. Rikoorkiisa ilaa hadda qofna ma jiro guuldarey inay garaacaan.
Labo kabood oo addimmo ah, dibedda iyo jimicsi, waxay ku lugleeyihiin si toos ah lafaha miskaha iyo biskurka. Foomamka ayaa laga soo ururiyey garbaha, garaan iyo lafaha lafaha, suxulka, curcurka, metacarpus iyo haruurka. Meelaha indhaha waxaa ka mid ah sinta, jilibka, shinni, hockey, metatarsus, xadhkaha, iyo furaha. Inta u dhaxeysa lafaha waxaa ku xiran xagasha dhaqdhaqaaqa.
Maqaalada ama qeybaha jidhka
Celcelis ahaan, farduhu waxay leeyihiin ilaa 60 maqaallo. Kormeerkoodu wuxuu ogolaanayaa inuu qiimeeyo taranka iyo qiimaha shaqada ee xayawaanka. Dhammaan maqaallada ayaa loo qaybiyaa saddex kooxood - madaxa iyo taallaaba, addimada, dastuurka.
Dhismaha madaxa ee Horse
Nooca madaxa ayaa keena dhakada. Iyada oo ku xidhan caleemaha, waxaa jira saddex nooc oo madax ah - jilicsanaan, jimicsi iyo toosan.
Nooca tooska ah ee cirifka ayaa laga helaa xayawaanka bariga ee xayawaanka. Nidaamka noocan oo kale ah ee dhakada ayaa suurtogal u ah inuu hawada kulul ku qaboojiyo marinka sanka ka dib marka uu neefsado ka dibna uu ka ilaaliyo ciidka isagoo dul daca sanka. Wakiil dhalaalaya ayaa ah faraska Akhal-Teke.
Waa muhiim! Ganash - qallajis la jilicsan yahay hoostiisa qadka hoose ee daanka. Masaafada u dhaxaysa iyaga ayaa si weyn u saameeya tayada shaqada ee faras. Haddii masaafadaasi ay ka yartahay 10 cm, markaas ganashadu waxay ku nasan doontaa caarada, waana ay adkaan doontaa in xayawaanka uu neefsado.
Nidaamka tooska ahi wuxuu u yahay dabeecad shaqeyn iyo fuulid fardo oo u baahan fayadhawr wanaagsan oo sanbabada. Qolfaha dhaadheer waa dabeecada shaqaynta iyo kaararka qabyada ah.
Hawlaha maqalka ee fardaha waa mobile, waxay ka kooban yihiin 3 jilicsan oo jilicsan. Waa inuu istaagaa, uu soo gebogebeeyaa, u jeeday ama si toos ah u dhammaatay. Dhaqdhaqaaqa xad-dhaafka ah ee dhagaha ayaa muujinaya in xayawaanku si liidata u muuqdaan oo isku dayaya in uu magdhowo la'aanta xogta. Dhegdhaqaaqyo aan la dhexdhexaad aheyn waxay muujinayaan dhegoolaha faras. Xasillooni, xayawaan caafimaad leh ayaa dhagaha si toos ah u ilaaliya, kuwaas oo si tartiib ah loogu jeestay dhinacyada.
Qaybta dareenka ugu weyn ee faraska, oo siinaya dib-u-eegis wareeg ah. Xitaa xitaa madaxiisa soo rogay, xayawaankani waxa uu arki karaa waxa ka soo socda. Waxaa jira laba qaybood oo indho la 'ah - dhabarka cufka iyo dhinaca hore ee sanka.
Ma taqaanaa? Gawaarida faraha badani waa mid ka mid ah qaybaha ugu nugul ee jidhka xayawaanka. Waxaa la gooyaa xididdada dhiigga, waxay leedahay dareen-celin waxayna ku lug leedahay habka socodka dhiigga. Hooves jilicsan ee hooves ee dhulka waxay kicisaa wadnaha wadnaha iyo horeyba dhiigga oo dhan jirka faraskiisa. Hoof laad - Hubka ugu daran ee farasku u isticmaali karo dambiilaha, iyo boogaha aan ciriirin ee aadka u culus oo ka culus mid ka mid ah caqli ahaan.
Caadi ahaan, indhaha farasku waa buluug, mugdi, qoyan, indhuhu yaryar oo dhuuban iyo dhego-dheer oo dhaadheer. Waxaa jira shakhsiyo leh indho dhalaalaya. Nidaam la'aanta ayaa saameyn ku leh aragtida.
Laga soo bilaabo afka afka. Guud ahaan, dadka waaweyn waa inay haystaan ​​40 ilkood - 24 kalluun, 4 kemiini (ragga) iyo 12 incisors. Waxaa lagu tirtiraa inta lagu jiro nolosha, kadib marka ay dhacaan ma soo laabanayaan.
Sida ilkaha ayaa si sax ah u go'aamiya da'da xoolaha. Masaafada u dhexeysa khafiifinta xad-dhaafka ah ee mooska ugu horeeya waxaa loo yaqaannaa cidhibta ilkaha. Xakamaynta afka ee faraska afkiisa ayaa cadaadis saaraya geeskan waxayna u oggolaaneysaa xayawaanka in la xakameeyo.
Qaybta laba jirka ah ee leh laba dusha, waa maqaarka maqaarka-xasaasiyadda. Dhexdhexaad ayaa lagu daboolaa timaha khafiifka ah, gudaha waxaa lagu daboolay epithelium maskax madow.
Waa muhiim! Haddii fardaha la cuno cunto aad u kulul ama qabow, waxay lumin doontaa dareenka dareenka iyo dib-u-dhac ku yimaada habka cuntada loo cuno. Cuntada ha qaboobin ama diirran kahor intaadan quudin xayawaanka.
Iyadoo bushimahooda, farduhu waxay taabtaan walxaha danaha, hubi cuntada ee shisheeye shisheeye. Dibnaha sare waxay yihiin mobile, dhinaca hoose ee waxaa ku jira qanjidhada salivary.
Sanka iyo sanka
Dulalka dulmiga ah waxay u egyihiin laba godood oo dildillaac ah oo furaya marinka daboolka sanka. Xayawaanka dabeecadda firfircoon, duufaanka waa dhuuban yihiin, waana fariisimo, fardaha shaqada ee dagan - qaro weyn oo dhuuban, qayb ahaan xiran. Cabbiraadda qoyan ee qoyan. Haddii sirku isbeddelayo midabka iyo urta, waxa loola jeedaa in xayawaanka jiran yahay.
Dhinaca dhererka dhererku waa hal saddexaad ka badan madaxa. Qoorta khafiifka ah waxay muujineysaa ficilka maneuvering ee fardaha, xawaaraha uu ku kacayo. Qoorta dhexdhexaad ah ama gaaban oo muruqa ah waxay ku dhacdaa fardo xoog badan oo aan ka yarayn laakiin xajmiga badan. Qaabka qoortu waa mid toosan, wax yarna maaha, taas oo ah mid aan dhibaato lahayn. Dhamaan fardaha waa fowdo sii kordhaya.
Ma taqaanaa? Horse magacaabay Buqofalus wuxuu ahaa kan ugu weyn ee taliyaha weyn ee Alexander The Great. Sida laga soo xigtay legends, wuxuu badbaadiyey nolosha milkiilaha mug leh sida ugu badan 9 jeer. Markii faraskii halyeeyga ahaa uu ku dhuftey hogaamiyaha Hindiya ee Porom, milkiilaha ayaa aasaasay magaalo la magac baxday geeridii Bucephalus, oo weli jira maanta oo hoos timaadda magaca Jalalpur. Aabayaashii Aleksanderos waxay ku tilmaameen Bucefalus "faras madow oo leh dabeecad sharaf leh."
Kani waa isku-xidhka qoorta iyo jirka. Gooluhu waxay noqon karaan kuwo sarreeya oo hooseeya. Xayawaanada aadka u sareysa ayaa ah kuwo sahlan oo dhakhso ah, oo leh miisaan yar oo tababaran oo boodboodaya, maaddaama ay lugahooda hore ugu socon karaan sarreeya.
Qiyaasida saamigeeda. Sida habboon, waa inay ahaato mid toosan (aan la jarin, ma ahan mid dhexdhexaad ah), dherer dhexdhexaad ah. Neefsasho sababtoo ah safar dheer oo aan lahayn dhaawac canqow, dhalasho iyo shaqo. Dib u dheeraantu maaha mid ku habboon fuushan fardaha, maadaama ay halis u tahay dhaawaca xayawaanka.
Waxaanu kugula talinaynaa inaad ka akhrido faraska fardaha: culus (Vladimir culus, Frieze, Tinker, Shire) iyo fuushanaan (Carab, Akhal-Teke, Appaloosa, orlov trotter).
Mid gaaban ma siinayo fardaha ku filan maneuverability, inkastoo ay damaanad qaadayso dulqaad iyo xasillooni. Nooca dabiiciga ah waxay muujinaysaa isuduwid aad u fiican iyo tayada shaqada. Mareeyaha, dhabarka ayaa had iyo jeer ka dheer kuwa ka soo horjeeda.
Tani waa masaafada dhinaca dambe ee croup. Alaarmadu waa inay noqdaan murqo, ballaaran, maadaama ay tahay culeyska ugu weyn ee shaqada iyo masruufka. Kuwa ku dhashey marey, cirbadaha ayaa yar yar.
Dhabarka jidhka ee ka soo jeeda dhinaca dambe ee dhinaca qaybta sare ee daboolka waxaa iska leh bisada. Croup wuxuu ku jiraa saddex meelood oo ka mid ah dhererka godadka, dhererka dhererkani wuxuu noqon doonaa mid gaaban. Waxaa jira saddex nooc - caadi, sareeya, hoos udhacay. Xayawaanka intooda ugu badan, croup waa caadi, in farsamooyinka isboortiga loo tababaray ayaa laga saaray. Marka laga eego dhinaca dambe ee faraska, croup si buuxda ayuu u marsiiyaa jirka illaa uu ku ballaariyo garbaha garabka.
Waa muhiim! Xayawaanka lakala yaryahay looma isticmaali karo inay culeyska culus saaraan - Tani waxay si toos ah u keeni doontaa dhaawaca wadnaha.
Thorax iyo caloosha
Feeraha maqaarka oo ballaaran ayaa loogu talagalay farsamooyinka qabyada ah, qoto dheer - fuulista iyo xayawaanka jinsiyada. Xuddunta suuxdadu waxay muujineysaa mugga ballaaran ee sanbabada iyo wadnaha oo xoog leh.
Caloolku waa inuu noqdaa mid jilicsan, oo jilicsan. Caloosha jilicsan waa mid aan la aqbali karin, waxay u muuqataa xayawaanka ay ka mid yihiin cayilka. Tani waxay quseysaa calool-xanuun badan - calaamad u ah xanuunka mindhicirka.
Timaha qoorta ee dabada ayaa ka soo baxa dhamaadka dabaysha, qaybta muruqyada wareega. Daboolka waxaa loo kordhiyaa tartanka ama isku dhejinta. Inta badan fardo-shaqeeyntu way gaabineysaa ama way xireysaa. Midabka dabada ayaa badanaaba ka duwan xayawaanka xayawaanka.
Nabarada hore iyo kan dambe ee farasku waa inay noqdaan kuwo si fiican u murqeeya. Lugaha danbe waxay abuuraan riix iyo bilaabaan dhaqaaqa, lugaha hore waxay u adeegaan maneuverability and stability. Lugaha hore waa ka gaaban yahay lugaha cagaha, iyo mid aad u ballaaran. Marka la eego xagga hore ee lugaha lugta ee farasku waa inay muuqdaan meel u dhaxaysa lugaha hore.
Ma taqaanaa? Lafaha ka xoog badan faraska, cid kale oo ka mid ah boqortooyada xayawaanka. Awoodooda jabka waa laba jeer xoogga granite, iyo cufnaanta culeyska waa 4 jeer ka weyn kan naxaasta. Si kastaba ha ahaatee, lafaha ka hooseeya jardiinada faras waxaa lagu qaadaa culus aad u ballaaran oo, marba burburay, si buuxda dib looguma soo celin karo.
Qaab dhismeedka gudaha ee faras
Xubnaha gudaha ee faraska ayaa masuul ka ah nuugista, dheef-shiidka, gaadiidka dhiigga ee ku jira unugyada iyo qawaaniinta dareenka sareeya.
Waxaa wakiil ka ah wareegyada waaweyn ee yar yar ee wareegga dhiigga. Waxay ka kooban tahay wadnaha afar qolood, oo dadka waaweyni ay gaaraan miisaanka 8 kg, halbowlayaasha, xididdada iyo xididada. Nidaamkani wuxuu bixiyaa unugyada jidhka oo leh oksijiin iyo nafaqooyin, waxay qaadataa oo soo saartaa dioxide carbon iyo alaabooyinka dheef-shiid kiimikaadka. Wadnaha, dhiiggu wuxuu u dhaqaaqaa halbowlayaasha jirka, wuxuu kala firdhiyaa unugyada iyada oo loo marayo kilyaha iyo, ka dib qaababka dheef-shiid kiimikaadku, wuxuu ku noqdaa wadnaha illaa xididdada. Celceliska garaaca wadnaha ee qof weyn oo caafimaad qaba nasasho waa 30-40 garaac, foal - 70-80.
Waa muhiim! Iyada oo ku saleysan qiyaasta garaaca wadnaha ee farasta ka dib jimicsiga jireed, waxaa suurtagal ah in lagu xukumo waxqabadka iyo jirdhiska jirka. Haddii, ka dib markii uu marsado ama miisaan culus yahay, heerka garaaca wadnaha ayaa kor u kacay 120 garaac daqiiqaddii, culeysyada noocaas ah ee xayawaanku waa mid aan loo dulqaadan karin.
Nidaamka neefsiga ee farasku wuxuu ka kooban yahay sanka, caleenta, trachea, iyo sanbabada. Dulalka iyo hawo-mareenka hawada ka dib, hawo ka dib marka uu neefsado wuxuu galaa caleemaha. Dariiqyada hawada qaada waxay sameeyaan nadiifinta koowaad, qoyaan iyo kululaynta hawada.
Halkan urka ayaa la aqoonsan yahay. Cirridka waa tuubo neefsasho ah. Waxay ka kooban tahay jooniska, waxaa lagu daboolaa xuubka xabka iyo sidoo kale waa xubin maqal ah. Trachea kaas oo tuubada neefsashadu ku dhaafto baaskiilada laga soo mariyo cirridka ilaa geeska sare ee wadnaha, halkaasoo ay ka kooban tahay laba tubo oo kala duwan. Sambabada - unugyo isku-dhafan oo dhiig leh ayaa ku jirta oksijiin waxayna bixisaa dioxide kaarboonka. Nidaamkan waxaa suurtogal ah inuu sabab u yahay daboolka dusha sare ee sambabada sanbabada, kaas oo ka kooban alveoli ugu yar. Waxay ku daboolan yihiin xididada dhiiga iyada oo darbiyada derbiyadu ay is-dhaafsadaan.
Ma taqaanaa? Faraskii ugu yaraa ee aduunka ayaa iska leh faraska fardo. Miisaanka 26 kg, dhererkeedu waa 43 cm, gabadha yar Thumbelina waxay ku qoran tahay diiwaanka Guinness Record of 2006. Waxay weli haysataa heysta rikoodhka ilaa maanta.
Celceliska sambabada ee xayawaanka weyn waa 50 litir. Nasasho, faras hal hal neef oo nuugaya 5 litir oo hawo ah. Marka faras u tagto gallop ama lynx, heerka neefsashadu wuxuu gaari karaa 120 neefta daqiiqad kasta. Qaadashadu waxay ku neefsadaa inta badan 80 neef oo daqiiqad ah.
Farasku waa mid geed leh oo leh caloosha hal qol oo ah 10-15 litir iyo mindhicirka dheer. Ka hor inta aanad wax cunin, farasku wuxuu ku dhejiyaa ilkaha macmalka ah wuxuuna ku qallajiyaa dhukay badan. Cunto quudinta ayaa caloosha galisa iyada oo loo maro hunguriga.
Waxaa la dhigaa lakabyada iyo sidoo kale tartiib tartiib ah, iyada oo aan la isku darin, waa la dheefay. Xakamaynta waxay ku bilaabmaysaa carbohydrates waxayna sii waddaa dufanka. Biyaha fardaha ee habka dheef-shiidka ayaa si deg-deg ah u dhacaya, sidaa darteed xayawaanka waa in la waraabiyaa ka hor cunto kasta iyo hal saac iyo badh ka dib. Cufnaanta caloosha ku jirta ee caloosha ayaa galaya mindhicirka yar, ka dibna xiidanka, ka dibna wuxuu ku jiraa qaybta, kaas oo ka masuul ah dheef-shiidka fiber iyo borotiinada. Caloosha, cunnooyinka cuntada waxaa loo shaqeeyaa qiyaastii 12 saacadood, mindhicirka yar - laga bilaabo 7 illaa 10aad. Qaybta caleemaha waxay cunaa cunto ka badan hal maalin, iyo mindhicirka weyn - oo ku saabsan laba. Guud ahaan, quudinta ayaa ku jirta jirka fardaha muddo ka badan 100 saacadood.
Waa muhiim! Biyaha ayaa gashaday mindhicirrada caloosha iyo dheelitirka nidaamka cuntada dheefshiidka. Cunto la cuno waxay bilaabataa inay halsano, taasoo ka dhalata dhacdooyinka cirridka iyo colka. Si looga hortago tan, waxaa lagama maarmaan ah in biyaha lagu dhajiyo nus saac ka hor iyo hal saac iyo badh ka dib cunista.
Nidaamka dhexe ee neerfaha farasku wuxuu nidaamiyaa noocyada kala duwan ee hawlaha xayawaanka ah, oo ay ku jiraan garsoorka aan shuruudaha lahayn iyo xitaa metabolismka. Qaybta ugu weyn ee nidaamkaan waa maskaxda. Waxay ka kooban tahay 10 waax, oo mid kastoo ka mid ah mas'uul ka ah hawlaha.
Faraska waa xayawaan aad u habeysan. Waxay leedahay xusuus aad u fiican, si sahlan ayaa loo helaa xasilooni shuruudaysan, si ikhtiyaari ah bulsho ahaan. Jidhka farasku wuxuu ka kooban yahay qalfoof, nidaamyada xubnaha gudaha, maqaarka iyo murqaha muruqyada. Waxaa caadi ahaan loo qaybiyaa maqaallo, kormeerid taas oo siinaysa fikrad ah tayada shaqada iyo tayada xoolaha. Iyadoo ku xiran faraska faraska, waxaa jira farqi u muuqda muuqaalka jirka, madaxa iyo addimada. Cunug kasta wuxuu ku taliyey xuduudaha dastuuriga ah ee bixiya farsamooyinka farsamada ee ugu wanaagsan.
Ma taqaanaa? Dalalka qaar ayaa u oggolaanaya isticmaalka farduhu inay yihiin tusaalayaal dadka indhoolaha ah. Dabcan, ujeeddadani ma isticmaalaan fardo dhaadheer oo caadi ah, laakiin xayawaan yar oo ah nooca Falabella. Fardahani waxay ku jiraan imtixaan qaas ah si ay u aqoonsadaan tayada loo baahan yahay hagaha iyo in la tababaro ka hor intaanay noqon qof la socdo. Xayawaankani waxa ay si fiican ugu jiheysan yihiin meel bannaan, ha ku lumin dad badan oo dad ah iyo gaadiid. Falabel wuxuu leeyahay nolol ka badan 30 sano, kaas oo u oggolaanaya in loo isticmaalo in ka badan eeyaha.
Nidaamka habdhiska dareenka habaysan iyo waxqabad gaar ah wuxuu xayawaankan u yahay saaxiib la jecel oo faa'iido leh.